Madaxweynaha Jubbaland oo caawa booqday Isbitaalka weyn ee Kismaayo.[Masawiro]
July 12, 2019 - Written by Editor
Kismaayo:-Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa uu booqday Isbitaalka weyn ee Magaalada Kismaayo halkaas oo la geeyay dadkii uu dhaawacu ka soo gaaray weerarkii ururka Al-shabaab ay ku qaadeen Hotelka Madiina ee Magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa uu booqday qaybta gargaarka deg dega ah oo ay dhakhaatiirtu la tacaalayeen shacab kale duwan oo qaba dhaawacyo qaarkood ay yihiin kuwa culus.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa uu tacsi
u diray dadkii eheladoodu ay ku dhinteen weerarkii maanta ka dhacay Kismaayo waxaan uu alle uga baryey kuwa qaba dhaawacyada in alle uu caafimaad deg deg ah siiyo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sheegay in Al-shabaab ay go’aansadeen siddii ay shacabka Soomaaliyeed loo tirtiri lahaa arrinkaas oo ay u maraan wado walba.
Ugu danbayntii ayaa Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxaa uu ku amaanay ciidanka amaanka Jubbaland sidda deg deg ah oo ay uga falceliyeen weerarka Hotel Madiina iyo sidda dad fara badan ay u soo badbaadiyeen.
Isha Masawirada TV-ga Jubbaland